सामग्री प्रयोग नियमहरू Suenee Universe
सामाग्रीको लागि उत्तरदायित्व
लेखक लेख वा छलफल पोष्टको सामग्रीको लागि मात्र जिम्मेवार छ।
लेखकको विचार बहुमतको विचार नहुन सक्छ र साइट अपरेटरको दृश्यसँग मेल खाँदैन।
यदि लेखक "हेर्नुहोस्" स्रोत ", त्यसपछि सामाग्रीको लागि जिम्मेवारी लिइएको लेखको स्रोतमा पर्दछ।
भरोसेमंदता र प्रयोग गरिएका स्रोतहरू
प्रकाशित लेखहरू तिनीहरूको असाधारण तथ्यहीन निर्दोषता र सत्यमलताको कुनै ग्यारेन्टी बिना प्रदान गरिएको छ। यो आफ्नो निर्णयले प्रदान गरिएको जानकारीको मूल्य द्वारा न्याय गर्न पाठक माथि छ।
यी स्रोतहरू लेखमा प्रदान गरिएको छ जस्तै यो। लेखक र अपरेटरकर्ता सन्दर्भ स्रोतको सामग्रीको लागि जिम्मेवार छैन, न त कुनै भाग वा भाग यसको।
"लेखक" को द्वारा ती व्यक्तिहरु द्वारा समझाईएको छ जुन लेखको सामग्रीको लेखक वा चेक / स्लोभाक भाषामा लेखको अनुवादको लेखक हो।
लेख लेखक सधैं बाकसमा सूचीबद्ध व्यक्ति हो लेखकहरू लेखको अन्त्यमा। यदि लेखक "हेर्नुहोस्" स्रोत ", त्यसपछि वास्तविक लेखक मात्र स्रोत लिङ्कमा लेखिएको सूचीमा सूचीबद्ध गर्न सकिन्छ जुन लेखको अन्त्यमा सूचीबद्ध गरिएको छ।
अनुवादको औचित्य सटीकताका लागि अनुवादक जिम्मेदार छैन। अनुवाद को एक स्रोत को रूप मा उद्धृत लेख केवल एक सूचनात्मक पृष्ठभूमि हुन सक्छ, परिणामकारी लेखक लेखक को सामाग्री हो।
नियमहरू साझेदारी गर्दै
कुनै पनि लेखको सामग्री मूल शीर्षकमा उद्धृत गर्न सकिन्छ जुन हाम्रो प्रारम्भिक उद्धरणको साथ, हाम्रो साइटमा पाठको पूर्ण पाठ सन्दर्भको साथ।
सम्पूर्ण सामग्री मात्र स्पष्ट लिखित रूपमा अन्य साइटमा साझेदारी गर्न सकिन्छ लेखकको अनुमोदन
कुनै पनि लेखको सामग्री वा यसबाट उद्धरण बदल्न वा सम्पादन हुँदैन।
कुनै तेस्रो पार्टी विज्ञापन लेखको सामग्रीमा समावेश गर्न सकिँदैन।
अनधिकृत विज्ञापन सन्देशहरू, भ्रामक पोष्टहरू र / वा क्यापिटलहरू द्वारा लिखित योगदानहरू मेटिन्छन्।
फोरम चर्चाहरु मा उल्लिखित नियमहरु को पालन गर्नुहोस छलफल फोरम.
यी नियमहरू सबै साइटहरूमा लागू हुन्छन्: www.suenee.cz, forum.suenee.cz, wiki.suenee.cz, www.ce5.czawww.pribehsrdce.cz.
यी साइटहरूको उच्चतम प्राधिकरण तिनीहरूको हो अपरेटर। सामग्री प्रबन्धक अपरेटर हो अधिकृत व्यक्तिहरू.
हामी तपाईंको सहयोगको प्रशंसा गर्नेछौं र सामग्री निर्माणमा सहयोग गर्न इच्छुकता।
अपडेट गरिएको: 02.04.2019, 17: 56
- यो साइट सही छ 161 प्रयोगकर्ताहरू अनलाइन